Archive du 20180612
TIM, MAPAR, VPM MMM Nahatafiditra minisitra 12
Novakiana tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha omaly alatsinainy 11 jona takariva ny didim-panjakana laharana 2018-540 manendry ireo mpikambana vaovao miisa 30 ao anatin’ny governemanta Ntsay Christian, ka vehivavy ny 08 ary lehilahy ny 22.
Riana Andriamandavy VII Minisitry ny serasera mampiahiahy
Omaly hariva ihany dia efa resa-be eraky ny orinasa fanaovan-gazety ny nanendrena an’i Riana Andriamandavy VII ho minisitry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana.
Tolona eny amin’ny 13 mey Ho fantatra anio izay tena heviny
Andrasan’ny mpanara-baovao fatratra izay ho ambaran’ny eny amin’ny kianjan’ny 13 mey anio talata momba ny firafitry ny governemanta Ntsay Christian.Fa raha ny resaka omaly aloha dia tsy mahafa-po antsika ary tsy ekentsika izao fomba nanatanterahana ny governemanta izao, hoy ny depiote Hanitra Razafimanantsoa teny amin’ny Kianjan’ny 13 mey,
Voahangy Rajaonarimampianina Ho sahirana raha misy mitory
Olon-tsotra, mpandraharaha, mpiasan’ny minisitera, teratany malagasy, teratany vahiny, karazan’olona marobe dia samy efa nandrenesana fitarainana ho niharan-tsotasotan’ny vadin’ny filoham-pirenena, Voahangy Rajaonarimampianina avokoa.
Potika ny firenena Ny vahoaka maditra, ny mpitondra adala
Mihazakazaka ny fahapotehan’ny firenena Malagasy satria ny vahoaka maditra sy sarotra alamina na koa sarotra entina sy mora ambakaina ary ny mpitondra adala tsy misaina afa tsy ny hameno kitapo.
Primatiora Maka toerana ny Mapar
Niroso tsikelikely amin`ny rafitra sy ny fametrahana ireo olona hiara-kiasa aminy eny anivon`ny Primatiora ny praiminisitra lehiben`ny governemanta Ntsay Christian.
Resaka fanorenana ifotony Lasa lamaody
Antoko, vondrona, vovonana politika, samy manitrikitrika ny amin’ny maha laharam-pahamehana ny fanorenana ifotony daholo.
Lalàmpanorenana Malagasy Takon’ny fifanarahana politika hatrany
Efa hatramin’ny taona 1991, taorian’ny raharaha 10 aogositra no nipoiran’ity resaka fifanarahana politika ity. Nantsoina hoe “convention du 31 octobre” moa izy tamin’izany ary nosoniavina tetsy amin’ny Panorama Andrainarivo.
FJKM Ambohibao Antehiroka Nahazo Akany vaovao
Tontosa ny alahady teo ny fanokanana ny Akany vaovao “ Manoa ny Avo” eo anivon’ny fiangonana Fjkm Ambohidroa Antehiroka. Fotoam-pivavahana nentina nisaorana an’Andriamanitra no nisantarana ny hetsika.
Voatazon’ny Warriors Zimbaboeanina ny amboaran’ny fifaninanana Cosafa Cup rehefa nandresy an’i Zambie 4-2 teo amin’ny lalao famaranana notontosaina tany Afrika Atsimo tamin’ny sabotsy 9 jona teo ry zareo.
Mondial 2018 Hevitry ny mpitia fanatanjahantena Malagasy
Nirilanto na i Dona Amin-dRandriantsoaniaina Nirilanto na i Dona filohan’ny ligin’ny baolina kitra any Amoron’Imania ankehitriny dia i Allemagne sy i Brésil no hanao lalao famaranana na dia tsy ao amin’ny heriny loatra aza ity farany.
Ireo kianja handray ny Mondial 2018 Hatolotra anao eto amin’ity pejy ity indray ireo kianja manaraka hanatanterahana ny Mondial Rosia 2018.
Ny kianja Olimpika Ficht any Sotchi mahazaka mpijery miisa 48.000 dia nandraisana ny lalao olimpika ririnina tany amin’ny tanànan’i Sotchi tamin’ny taona 2014 ary nandray voalohany lalao baolina kitra tamin’n y taona 2017.
Fampianarana teknika Ny 2 %-n’ny afaka baka teknika no tafiditra any amin’ny pôliteky
Nivoaka tamin’ny fahanginana ireo sendikan’ny mpiasa mpampianatra mpampiofana eo anivon’ny minisiteran’ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa omaly.
Mangotraka ny “kidnapping” Lasibatra indray ny tompon’ny Ocean Trade
Nalain’ny jiolahy an-keriny ny tompon’ny orinasa Ocean Trade, Hiridjee Mustafa.
FANAFIHANA TANY BEMARAHA
Vao tsy voavaha akory ny olana izay nitarainan’ny fikambanan’ny mpitatitra mpizahatany ary koa ny mpamily mpitari-dalana dia efa nisy fanafihana hafa indray teny amin’ny lalana izay mizotra any amin’ny Tsingin’i Bemaraha.
Ry zareo avy eo anivon’ny antoko Tiako I Madagasikara sisa no tazana tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey raha ny omaly.
Nahemotra amin`ny 22 jona ho avy izao indray ny fivorian`ny filankevitra ambonin’ny mpitsara (CSM) tokony ho notanterahina ny herinandro lasa teo.
Inspektoran’ny tahirim-bolam-panjakana Miantsoroka andraikitra maro lafy
Ny didim-panjakana lah 62-098 tamin’ny 28 febroary 1962 no mamaritra ny andraikitry ny inspektoran’ny tahirim-bolam-panjakana (IT). Izy no sefo mpanampy na mpitantana amin’ny sehatra fitantanana kajy (comptabilité).
Vidin-dranon’ny JIRAMA Hiaka-bidy amin’ny 2019
Hiakatra 3 ka hatramin’ny 4 Ar ny iray litatra amin’ny vidin-dranon’ny JIRAMA manomboka amin’ny taona 2019 raha mbola mijanona ho 0,5 Ar amin’izao.
Sakafo masaka hamidy eny amoron-dalana Tsy maintsy atao anaty “Vitrine”
Anisan’ny mandeha indrindra ny varotra hani-masaka amin’izao eto an-drenivohitra.
Fifandraisana ara-barotra manosika ny toekarena Mila maka lesona amin’ireo firenena efa tafita i Madagasikara
Maro ireo firenena afrikanina efa nahazo tombony tamin’ny fifampidirana ara-toekarena (Intégration Economique) natao tamin’ny firenena hafa. Mila fanazarana ela ny fanaovana izany fa tsy vita ao anatin’ny fotoana fohy.
Fahalainan’ny mpampiasa vola Manimba ny toekaren’i Madagasikara
Miroso amin’ny famahana ny olana ara-politika ireo ankolafin-kery misy eto amin’ny firenena. Na izany aza aloha dia hita taratra amin’ny seha-pihariana rehetra fa sahirana tanteraka ny vahoaka Malagasy.